Nkọwa:Ejiri Lightbox Shoebox,Ejiri Shoebox Light 300W,Ụgbọ ịnyịnya na-adọba ụgbọala n'ọdụ ụgbọ mmiri
Home > Ngwaahịa > Ejiri Lightbox Shoebox > Ejiri akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ > DLC 320W Ruru Ogwe Mpempe akwụkwọ Lotbox
Ihe Nlereanya.: BB-LD-320W-S-DR1
Ejiri Lightbox Shoebox abia na obosara ohuru ohuru nke obosara ogwe aka na ihe ndi ozo. Ejiri akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ 300W iji dabara na mkpanaka okirikiri na ntụpọ, na ntụgharị ntụziaka ndị ọzọ. Ugbo ala na-adọkpụ ụgbọala na-adọba ụgbọala nwere ike iji dochie ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 1000W metal halides (MH) / HPS / HID arụ ọrụ maka ime ụlọ ọkụ ọkụ, dị ka ọkụ ọkụ ụgbọala, ọkụ n'okporo ámá, ndị na-ere ahịa ụgbọ ala, ebe a na-anọ n'èzí, ụzọ ụkwụ, ọkụ egwuregwu.
Ụlọ ọrụ azụmahịa anyị na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-eme ka ndị na-adọba ụgbọala na-emepụta ihe ọkụkụ nwere ike imepụta 41600 lumens nke ọkụ mmepụta (nke ahụ bụ 130 Lumens Per Watt), na-enye oke lumens, nnukwu mpaghara mkpuchi maka mkpa ọkụ gị. Ụzọ anyị na- edugharị n'okporo ámá bụ ihe mgbatị dị mma maka 1000W nke mgbatị ígwè na mgbatị ọkụ sodium nke dị elu nke nwere ike ịchekwa ego na ike ọkụ ruo 75% site na ịgbanwuo ọkụ ọkụ ọkụ.
Anyị na-agba gị nkwa na ọ bụrụ na ọ bụla iduga ìhè n'okporo ámá 300w , a na-anwale ule tupu i nweta ngwaahịa ETL kachasị mma maka ndị ahịa anyị.
150W Led Street Light with Motion Sensor 19500LM Kpọtụrụ ugbu a
Ejiri Lightbox Shoebox Ejiri Shoebox Light 300W Ụgbọ ịnyịnya na-adọba ụgbọala n'ọdụ ụgbọ mmiri Led Street Light Shoebox Ejiri Ìhè Mmiri Shoebox Ejiri Udo Light Kit Ejiri Shoebox Light 150W Ejiri Ufo Light Fitit